Semalt: 6 fotsy fotsy SEO hanatsarana ny fifamoivoizana
Te-hitondra fiara be mankany amin'ny tranokalany avokoa ny webmasters rehetra, fa vitsy amin'izy ireo no mahatratra ilay asa. Raha lazaina amin'ny teny hafa, azontsika atao ny milaza fa ny fifamoivoizana dia ny hany fomba ahafahana mijery sy hitsikerana maro ao amin'ny tranokalanao, fa anisan'ny SEO mainty mainty. Raha te-hanana fitoboana kalitao ianao, dia tsy maintsy manaraka ny fitsipika sy fitsipika momba ny Google ianao ary manaisotra ny paikady fototry ny SEO SEO.
7) Alexander Peresunko, mpitantana ny Success Successor avy amin'ny Semalt , dia manome toro-làlana fotsy hoditra vitsivitsy ahafahana mitondra fiara be loatra amin'ny fifamoivoizana amin'ny tranokalanao.
Fomba 1. Mahaiza mandanjalanja amin'ny tranonkala Q & A
Q & A ny tranonkala toy ny Yahoo Answers sy Quora dia loharanom-pifandraisana goavana. Raha manana orinasa madinika ianao ary te hampitombo azy ao anatin'ny herinandro vitsivitsy dia tsy tokony handany fotoana ianao eto sy any ary ho mavitrika amin'ny roa amin'ireo tranonkala ireo.
Alohan'ny hanombohana ilay fifanakalozan-kevitra, dia tokony hamantatra ny lohahevitra, sokajy, ary andian-dahatsoratra izay mifandraika amin'ny tranokalanao. Tsy misy fomba hamaliana ireo fanontaniana ao amin'ny vondrona izay tsy resahina ny lohahevitry ny tranonkala. Azonao atao ihany koa ny manomboka ny fifanakalozan-kevitra manokana ary mamorona vondrona iray samihafa, manintona olona maro hatrany amin'ny tranokalanao amin'ny alàlan'ny fametrahana rohy ao anatin'ny fanontaniana. Azonao atao ny mametraka rohy maromaro ao amin'ny tranonkalanao mifandraika amin'ny votoatin'ilay fanontaniana ary mamaritra ny olona sasany hahazoana traikefa be dia be.
fomba fiasa 2. Mamorona fanentanana hamokarana horonantsary
Androany, maro ireo olona liana amin'ny horonan-tsary fampiroboroboana video , noho izany dia tokony hamorona andianà fanentanana isan-kerinandro ianao. Ataovy azo antoka fa mifandraika amin'ny tranokalanao izy ireo mba hahafahanao mifantoka amin'ireo mpihaino maniry.
Ny dingana voalohany dia ny mamantatra sy mamantatra ny anton'ny fanentanana ataonao..Aorian'izay dia tokony ho fantatrao ny lohahevitra tianao hifanakalozana ao amin'ny votoatin'ny video ary ampiasao antso ho amin'ny fanatanterahana fihetsiketsehana bebe kokoa ao anatin'ny minitra vitsy. Aza adino ny manoratra sy mamoaka ireo horonantsary ao amin'ny YouTube ary manohy mampiroborobo ny fantsonao.
Metatra 3. Ampiasao ny firaiketam-baovao
Ny fomba fahatelo dia mampiasa curation. Fotoana mandany fotoana izao, fa ny firaiketam-po amin'ny ankapobeny dia iray amin'ireo fomba mahasoa indrindra sy mahagaga ny mitondra fiara be loatra amin'ny fifamoivoizana amin'ny tranokalanao. Plus, manampy anao hanangana backlinks kalitao ao anatin'ny ora maro izany. Tokony hokarakarainao foana ny votoatin'ny fampandraisana anjara sy ny fampahalalana ary ny miala amin'ny asan'ny hafa. Tokony ho voalohany ary azo ampiasaina amin'ny tranokala toy ny Storify sy Scoop.it.
Fomba 4: Fampielezan-kevitry ny varotra
Ny fampielezan-kevitry ny marketing dia fomba mahomby sy mahery vaika hananganana ny tranokalanao na marika eo anoloan'ny olona marobe. Amin'izao andro izao, maro ny mpizara dizitaly mampiasa ity paikady ity mba hampiroboroboana ny varotra sy ny marika amin'ny aterineto. Ny mpanafatra dia samy hafa karazana, fa ireo mpilalao gitara malaza indrindra dia olo-malaza, mpandinika, mpahay siansa ary bilaogera. Afaka miara-miasa amin'ny sasany amin'izy ireo ianao mba hahazoany tombontsoa lehibe ho an'ny tranokalanao na marikao.
fomba fiasa 5. Fidio ny tranokalan'ny birao
Ireo sehatra fiadian-kevitra an-tserasera dia fomba tsara ahafahana manatsara ny fifamoivoizana. Afaka miditra amin'ny forums malaza vitsivitsy ianao ary mandefa ny tranokalanao. Miezaha hiditra amina olona maro amin'ny resadresaka ary avelao ny rohy ao amin'ny tranokalanao ao anatin'ny resaka.
Fomba 6. ampiasaina amin'ny Media sosialy
Tokony hampiasa ny fampiasana amim-pahendrena ny tranonkalan'ny tambajotra sosialy ianao amin'ny fitaterana ny fifamoivoizana amin'ny kalitaon'ny tranonkala. Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+ ary Instagram no loharano tena tsara hampiroboroboana ny votoatin'ny Internet. Andramo ny ankamaroan'ny tiana, ny mizara, ny fanehoan-kevitra, ary ny mpanara-dia amin'ny fanarahana ny fitsipika sy fitsipika ao amin'ny tranonkala tambajotra sosialy. Zarao ao amin'ny vondrom-piarahamonina Facebook ny votoatinao ary tsidiho ara-potoana. Tokony ho vaovao, azo zaraina ary fampahalalana Source .